Aiza no hividianana singa elektronika an-tserasera? | Avy amin'ny Linux
Manangana laboratoara elektronika miaraka amin'i raspberry pi, arduino ary singa namboarina manokana, ny fizotran'ny mividy singa elektronika Ela sy nandreraka ihany izy io, satria maro ny toerana hividianana singa elektronika. Izany no antony nanapahako hevitra hanolotra sosokevitra avy amin'ireo tranonkala fantatro mifandraika amin'ny fividianana pcb, voaroy, arduino, kojakoja robotika ary fitaovana maro karazana izay azontsika atao azo antoka sy haingana.
Ireo tranonkala hotondroiko manana laza tsara amin'ny fananana tahan'ny vidiny / kalitao tsara, misy ny maimaim-poana ny fandefasana ary ny hafa manolotra fisondrotana fa tsy maintsy manadihady isika, amin'ny tranga sasany dia mpanaparitaka ny vokatra avy amin'ny antoko fahatelo izy ireo ary amin'ny sasany kosa mpamokatra. Ny mpaninjara izay nampiasako be indrindra dia ny LCSC, arahin'i jameco sy adafruit, etsy ambany no omeko ny antsipiriany momba azy ireo.
1 Fivarotana singa elektronika
1.4 Mouser sy Digikey
2 Fivarotana elektronika miorina amin'ny mpamokatra
Fivarotana singa elektronika
Imbetsaka aho no nividy ampahany tamin'ny LCSC.com, dia ilay orinasa mitovy amin'izany EasyEDA.com Ary manana safidy tsara amin'ny fandefasana ampahany maimaim-poana ianao rehefa atambatra ny singa elektrika amin'ny filaharana PCB. Tsy lehibe toa an'i Mouser na Digikey izy io, fa ny ankamaroan'ny vokatra vokariny dia mora vidy kokoa, ary koa manana kalitao somary mendrika raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy. Manome singa elektronika amin'ny vidiny sy kalitao tena mendrika izy ireo.
Mba hanomezana hevitra antsika ny MAX6675ISA + T amin'ny LCSC dia mitentina $ 2.51 ary ao Mouser 17.2 $, amin'ny fomba mitovy amin'izany, ny MICRO USB 5S dia mitentina $ 0.06 ao amin'ny LCSC raha mitaha amin'ny 0,46 $ ny vidiny ao Digikey, toy izany koa, mahazo vokatra toa anao ianao RASPBERRY PI 3 tsy misy izany any amin'ireo orinasa hafa. Zava-dehibe ny manamarika fa ny tombony lehibe indrindra amin'ity sehatra ity dia ny fampifangaroana ny baiko eo amin'ny LCSC sy EasyEDA, noho izany dia orinasa tsara hodinihina.
Orinasa iray hafa izay mitantana ny varotra singa elektronika miaraka amin'ireo entana manerantany Taida, izay mizara vokatra marobe, manana fanohanan'ny varotra somary mahomby ary manana sehatra miaraka amina protokolona fiarovana voalohany. Ny vidiny dia mifaninana, amin'ny tranga sasany miaraka amin'ny fanampiana kely aorinan'ny varotra.
Bitsbox dia sehatra fivarotana singa elektronika an-tserasera izay manana ny Fanjakana Mitambatra ho ivon-toeram-piasana, manana vokatra marobe lafo vidy miaraka amin'ny kalitao avo lenta, manana fandefasana erak'izao tontolo izao, saingy ny tena marina dia tsy dia manintona loatra ny vidiny amin'ity, koa any Eropa dia tsy maintsy ampidinao ny sarany VAT mifanaraka aminy.
Mouser sy Digikey
Mouser sy Digikey dia sehatra fivarotana singa elektronika lehibe roa izay tsy mifaninana amin'ny vidiny fa amin'ny isan-karazany ao anaty lisitra aroson'izy ireo, eo amin'ny sehatr'izy ireo no nividianako vokatra maro samy hafa kalitao, ny tombony dia ny fananan'izy ireo vokatra izay tsy izy ireo mora hita amin'ny sehatra hafa, na izany aza, ny vidin'izy ireo dia mety lafo lavitra noho ny mpifaninana aminy.
Ankoatr'ireo sehatra ireo dia misy safidy maro hafa miaraka amin'ny tombony sy fatiantoka ananany, ny sasany izay fantatro ary mihevitra aho fa azo antoka farafaharatsiny dia ireto manaraka ireto:
RS Components: www.rscomponents.com
Elektronika zana-tsipika: www.arrow.com
4 Starelectronics: www.bibidiertronics.com
Fivarotana elektronika miorina amin'ny mpamokatra
Ny zava-dehibe dia betsaka ihany koa ireo magazay manome modely elektronika, fitaovana enti-miasa malalaka, ary tetikasan'ny robotika hamokaran'ny mpamokatra ny tetikasan'izy ireo. Ka ny mpanamboatra vokatra farany elektronika dia manana ny sasany amin'ireto sehatra manaraka ireto izay azo antoka fa mahafeno ny filan'izy ireo.
Seed Studio: https://www.seeedstudio.com/
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Aiza no hividianana singa elektronika an-tserasera?
Tsara, ratsy loatra, tsy natao ho an'i Amerika Latina, indrindra an'i Mexico.
Mandefa manerana an'izao tontolo izao izy ireo, mipetraka any Peroa aho ary mahazo baiko tsy misy olana
Ao amin'ny Dealextreme dia nahazo singa sy mora vidy aho.
Alexander Castro M. dia hoy izy:
Misaotra nizara vaovao dia maneho fa manana traikefa ianao. Te hanontany anao aho raha fantatrao ny orinasa sinoa iray izay, ankoatry ny fanamboarana ny PCB, dia manamboatra singa ao amin'ny PCB ihany koa.
Valiny tamin'i Alexander Castro M
Tao amin'ny lcsc.com dia hitako fa indraindray ny vokatra dia miteny (Mividy), indraindray milaza hoe (Backorder), ahoana raha te-hividy aho raha misafidy sasany amin'ireo singa (Mividy) ary ny hafa toa (Backorder) satria misy tsy misy tsindry azo atao (Vidio).
Tsy alefan'izy ireo amiko ve ny zava-drehetra, sa miandry ny fananany ny entana rehetra handefasana azy ireo. Tsy mbola nividy an-tserasera toy izao aho.